Mụọ asụsụ Chinese na ngwa a nke na-eme ka ihe dị mfe | Gam akporosis
Otu esi eji ngwa a eji amuta Chinese na ngwa a maka gam akporo
Ihe karịrị nde mmadụ 1.200 nọ na China, Anyị nwere ike ịghọta na anyị chọrọ ịmụta Chinese site na gam akporo ekwentị anyị. Asụsụ nke na - eme ka mmadụ nwee ike inwe ọrụ n'ihi nnukwu ikike nke mba a na - echekwa, nke ji nwayọ na - edobe onwe ya dịka mba kachasị nwee ike na ụwa.
Nsogbu banyere asusu gi bu na anyi aghaghi ime ya ịmụta site ọkọ onye ọ bụla nke gị onwe gị na-agụ akụkọ. Dịkwa ka ndị JapanỌ bụghị ihe dị mfe. Ọ dabara nke ọma, anyị nwere echiche nke onye nrụpụta chọrọ ịkụziri gị asụsụ China site na ịmụ akwụkwọ odide China site na ngwa ya akpọ Character Trainer Chinese.
1 A adịchaghị ngwa na-amụta Chinese
2 A ọma ahaziri ngwa
A adịchaghị ngwa na-amụta Chinese
Mgbe niile afọ gara aga e jikọtara ihe niile si China dị ka ọnụ ala na enweghị oke mma. Mana ihe na-agbanwe n’afọ ndị na-adịbeghị anya ekele nye nnukwu ụdị ndị gosipụtara na e nwere ọtụtụ akwa ịkpụ karịa ka ọ dị na mbụ na mba a.
Anyị na-ekwu n'ụzọ doro anya banyere ụdị dị ka Xiaomi na Huawei ndị meghere anya ha nye nde mmadu iji gosiputa na inwere ego inwere ike inwe ihe nlere anya na ekwentị mkpanaaka na ngwụcha nke ụdị ndị ọzọ ọdịda anyanwụ. Ka anyị kwuo na ha emeghewo ụzọ ọtụtụ ndị ga-ewepụ ụjọ ha wee bido ịnwale ụdị ụgbọ ala ndị a na-amaghị ama ebe a, mana nke nta nke nta na-amalite ịda maka nnukwu uru ha bara maka ego.
Oburu na China gbasaa, otua ka asusu ya na - adi Character Trainer Chinese nwere ike ịghọ ngwa dị mkpa iji mụta ihe odide ma ọ bụ akara ndị China. Ọ bụrụ na anyị cheta na egwuregwu egwuregwu a sitere na USM, onye nkwusa n'azụ mmegharị nke egwuregwu Catan na Kahuna, anyị nwere ike ịghọta na e nwere ọtụtụ ihe n'azụ egwuregwu a na-akpọ Character Trainer Chinese.
Ma ọ bụghị egwuregwu, ọ bụ karịa ngwa mmuta ngwa mmuta. Ebumnuche ya bụ ikuzi mkpụrụedemede Chaịniiji iji kwadebe anyị nke ọma maka ndị chọrọ ịgụ ma ọ bụ asụ n'asụsụ ha. Idealzọ kachasị mma iji malite njem anyị na ọmụmụ nke Chinese.
A ọma ahaziri ngwa
Agwa ọzụzụ Chinese visual mmụta usoro bụ pụrụ iche na ga-akụziri gị ka ị na-echeta leta, pụtara na pronunciation ngwa ngwa. Naanị ịnụ ụtọ oge na ịnụ ụtọ akwụkwọ ozi ndị China ahụ.
Ekepụtara mmụta mmụta kpụ ọkụ n'ọnụ nke China a na nkwado na Confucius Institute na Munich ma na-eduzi gị site na nkwụsị iji nweta nghọta siri ike nke okwu ndị nwere isi okwu, ihe atụ, na ihe ngosi. Nke ahụ bụ, ọ na-etinye ihe niile na efere ka ọ bụrụ na itinye obere mgbalị n'akụkụ gị, ị nwere ike ịmụ asụsụ a nke ụdị nsogbu a, mana ọ nwere ike mepee ọtụtụ ọnụ ụzọ ndị ọkachamara; n'ezie ọ na-esiri ike ịchọta ndị na-asụ Chinese na asụsụ ọzọ, yabụ egbula oge gị.
Irè Mmụta nke mkpụrụedemede 288 asụsụ ndị bụ isi site na enyemaka nke mkpakọrịta.
Okwu, ihe ọ pụtara, ịkpọ okwu na transcript dị mfe icheta.
Usoro mmụta na-akpali akpali maka ọganihu ngwa ngwa.
Dabere na ihe omuma nke oge a na ihe omumu banyere ihe omuma, yana otutu nhazi ihe.
Kpọmkwem isi na ọdịnaya nke HSK larịị 1 na 2 ule.
Ngwa zuru oke maka ịmụ ihe, azụmaahịa na njem.
Bebụ a adịchaghị ngwa, Ọdịdị ịzu Chinese na-enye gị ohere ịnweta ahụmịhe niile na-enweghị mgbasa ozi na ụdị micropayment ọ bụla, yabụ ọ ghọrọ ezigbo egwuregwu-ngwa maka ịmụ asụsụ a. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ enyemaka enyemaka ọzọ maka usoro Chinese nke ị na-enye ma ọ bụ na ị ga-aga mba ahụ, ọ bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ dị mkpa. Have nwere ya na Playlọ Ahịa Google maka € 2,79 ịmalite na mba dum dịka China.
Foto nke Myriam Zilles sere.
Agwa ọzụzụ Chinese
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi eji ngwa a eji amuta Chinese na ngwa a maka gam akporo
Leaked ụfọdụ n'ime nkọwa nke Asus ROG Ekwentị 2 site na TENAA: 5800 mAh batrị na anya
Xiaomi Mi A3: ndị a bụ isi ọdịiche dị na Xiaomi Mi A2